Hong Kong - esinye sezimangaliso aseMpumalanga - yindawo enhle! Ukuba uhlobo esifundeni nezokuphatha China, kuba omunye, yasebhange kanye eziyinxanxathela omhlaba anothile zezimali emhlabeni. Likuphi Kong? It ithatha oluseningizimu-mpumalanga yeChina. Lo muzi ine indawo 1104 amakhilomitha square (mayelana 426 endaweni engamakhilomitha-skwele).
Kufakwe nendawo prime, it has zonke izinzuzo kanye izici isifunda echumayo ashukumisayo. Lapha ungathola charm ukuphila tsivizizovannoy yesimanje kanyekanye inala izikhumbuzo esidlule zomlando. Uma uvakashela ezidumile ngaphezulu ingxenye - Ocean Park, Uhlolojikelele ekhexisayo Victoria Peak noma enhle Repulse Bay, umbono Hong Kong, yebo, ukuphila kuze kube okulindele. Kungaba nzima ukuthola indawo ejabulisa ngaphezu emzini Hong Kong. Isimo sezulu sisihle unyaka wonke.
Kuyinto idolobha elinabantu abantu mayelana 6970000. Iningi labantu Chinese ukukhuluma Cantonese nesiNgisi. Cishe bonke abasebenzi emkhakheni wezokuvakasha futhi abashayeli bamatekisi ungakwazi ukuxhumana nge-English.
Ekhuluma ukuphi Hong Kong, singasho ukuthi unesikhathi evumayo indawo, usekhonza njengomshumayeli wesikhathi ngamazwe sezoku- thutha. Kukhona izindiza nsuku zonke e-United States, eBrithani, eCanada, e-Australia, iJalimane, iFrance, iNetherlands, Singapore, Malaysia, ePhilippines, India, Thailand, njll Izithuthi zomphakathi ezisebenza kahle kahle. Zonke nekambiso yeenthuthi yomphakathi woke ezakha ngesitimela, amabhasi, amatekisi, trams izikebhe, lapho ungakwazi kalula uvakashele zonke izingxenye zedolobha.
City siqukethe izingxenye ezine: Hong Kong Island, Territories okusha, Peninsula Kowloon kanye Outlying Islands owayemude encane. Hong Kong Island maphakathi ezombusazwe, umnotho, ukuzijabulisa kanye nezohwebo. Umbuso wasenyakatho Ingxenye esemqoka ezindaweni commercial nokuzijabulisa. izindawo zokuhlala zitholakala kule ndawo esempumalanga, kuyilapho isifunda esiseningizimu liyaziwa ulwandle yayo osogwini olusenyakatho nasemathekwini.
Kowloon - kwenye ingxenye letihamba yedolobha, okuyinto Kunconywa, ethi ukuvakasha e-Hong Kong. izindawo wakhe kukhona usuku asebenzayo nobusuku, futhi izivakashi bangazizwa bekhululekile, ejabulela nightlife ethakazelisayo, ngoba Hong Kong ngokuqinisekile elinye lamadolobha ephephe kunayo yonke emhlabeni. New Territories futhi Outlying Islands kuyindawo ephelele ukuzwa ukuthi ujabula kanjani ubuhle bemvelo Hong Kong. Ngakho-ke kunzima ukusho ngokuqiniseka ukuthi lapho i-Hong Kong - lapha ungabona muzi amatasatasa, onokuthula imvelo unspoilt.
Njengoba umuzi evulekile nge itheku enhle engokwemvelo, kuba kuhlangana abanamasiko nezinkambiso ezihlukahlukene ngokuvumelana namasiko Chinese namathonya angavamile. Ngakolunye uhlangothi, iminonjana isiko British ingatholakala yonke indawo (ngenxa zamakoloni). Ngakolunye uhlangothi, ekhuluma mayelana ukuphi Hong Kong, umuntu akakwazi ukhohlwe walondoloza amasiko kanye nezimiso ubuConfucius, eladabuka mpumalanga China. Lokhu kubonakala imikhosi athakazelisayo, njengathi Spring Festival, noma Christmas.
Umuzi futhi isikhungo cinema yesimanje kanye pop. Kuyinto lapho kwazalelwa khona hero Kung Fu - ngasekupheleni Bruce Lee futhi Dzheki Chana ewubuciko, Hong Kong uyaqhubeka ukuheha ngaphezulu futhi ohahela isikhundla ngaphezulu izinkanyezi ezingaba nosomabhizinisi.
Wines baseMontenegro - le isikhumbuzo engcono
Okunethezeka Koh Chang. Amazwana kanye nemigqondo
Kwezinye izimo, umshwalense iyadingeka ukuze Schengen
Knockout - yikhono aphonse abaphikisi nge bhaklu
Izindleko engaguquki kanye variable: izibonelo. Isibonelo izindleko variable
Indlela ukuze alulame idatha kusuka drive flash?
Pizza ku Dyukanu: izithako, zokupheka
I izakhiwo eziyingqayizivele uwoyela ulwandle lalesi sihlahla
Indlela ukuxhuma izisusa crocheted, ngendlela ebumbene?
Indlela ukukhetha smartphone izingane?
Yikuphi isibhamu kuncono Foam? Yikuphi isibhamu engikukhethayo?
Iminyundu Medical. Izimo
"Kapsiol" Izinwele: Izibuyekezo ikhasimende